Ellicott Dredges Ho an'ny famerenana amin'ny laoniny ny Marsh & Wetland, fiarovana ny morontsiraka
Ny fikojakojana ny honahona, ny morontsiraka ary ny honahona dia mety ho zava-dehibe amin'ny fitehirizana ireo fonenana mahavokatra voajanahary ireo. Ny fanarenana ny tontolo iainana dia manala ireo simenitra efa simba sy voaloto avy amin'ny lalan-drano mamela ny fikorianan'ny rano velona hitondra otrikaina sy hanary fako.
Ny fanatsarana ny tontolo iainana azo alaina amin'ny fanodinana drakitra dia mety hisy fiatraikany tsara amin'ny fahasalaman'ny olombelona ary koa ny biby sy ny zavamaniry amin'ny faritra manodidina. Indraindray ny fanodinana ny tontolo iainana dia mitaky fametrahana mazava tsara avo lenta mba hahazoana antoka ny tanjon'ny tetikasa ary hitazomana ny tontolo azo antoka.
Ny Elicott Series Dredge 370HP Dragon® ary ny Series Dredge 670 Dragon® dia «dredge suction» azo entina manapaka izay miasa tsara amin'ny ety ary koa ny tetikasa malalaka misokatra .. The Ellicott Series 3Dredge 60S Swinging Dragon® ary Series 460SLM Fihetsiketsehana Dragon® dredge dia dredges tohatra mihetsiketsika izay miasa tsara indrindra amin'ny faritra tery ary misy ny takiana marina amin'ny dredging. Ireo maodely rehetra ireo dia natsangana tamin'ny sehatra somary voafintina ka mahatonga azy ireo ho tonga lafatra amin'ny ankamaroan'ny tetikasa famerenana amin'ny laoniny sy ny tontolo iainana.
Andiany 360SL Dragon® Dredge
Famerenana amin'ny laoniny ny Marsh sy Wetland
Ny tetik'asa famerenana amin'ny laoniny Marsh sy Wetland dia mahasoa amin'ny fialamboly eo an-toerana sy ny toeram-ponenana voajanahary. Ny fikorianan'ny tafio-drivotra ara-nofo sy ny tafio-drivotra dia mametra ny fantsona manome rano madio ho an'ny tany mando na dobo. Ny fitrandrahana ireo fantsona ireo dia ahafahan'ny rano mivezivezy miditra sy mivoaka amin'ny tranokala, mitondra otrikaina ary mamoaka fako.
Mianara bebe kokoa momba ny famerenana amin'ny laoniny ny Wetland sy Marsh
Ny firongatry ny toetrandro izay mihabe tsy ampoizina dia nisy fiatraikany be tamin'ny faritra izay mora tohin'ny fikaohon-tany sy ny tondra-drano. Ireo toe-javatra ireo dia nahatonga ny fahatsapana fa maika ny fananganana faritra amorontsiraka nohatsaraina izay misy tetik'asa marobe toa ny Fuller Street Beach any Edgartown, Massachusetts (Etazonia).
Ny famenoana tsy tapaka ny torapasika sy ny fanatsarana ny morontsiraka dia nanjary fanao mahazatra manerantany. Ireo tetik'asa rehetra ireo dia azo tanterahina amin'ny alàlan'ny paikady fanaovana dredging izay natao hiarovana ireo fotodrafitrasa sy ny olombelona manoloana ny fandrahonan'ny fiakaran'ny ranomasina sy ny tondra-drano. Ellicott Dredges dia manana karazana dredge maromaro izay natao manokana ho an'ny tetikasa mifandraika amin'ny fiarovana ny morontsiraka.